Deg Deg: Kenya oo soo warisay qofkii ugu horeeyay ee u geeriyooda Carona - BANDHIGA
Deg Deg: Kenya oo soo warisay qofkii ugu horeeyay ee u geeriyooda Carona
66 jir u dhashay dalka Kenya ayaa noqday qofkii ugu horeeyay ee dalkaasi ugu geeriyooda cudurka Coronovirus, wuxuu ka soo safray dalka Koofur Afrika isagoo soo maray wadanka Switzerland, sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka Kenya.
Kenya ayaa sidoo kale diiwaan gelisay inkabadan 20 qof oo qaba cudurka Caronovirus kuwaa oo dalal kale ka yimid iyo qaar xiriir la sameeyay dadka laga helay.
Soomaali badan ayaa ku nool wadanka Kenya waxaana hadda wasaafradda caafimaadka dalkaasi ay karantiileysaa qof Soomaali ah oo ka yimid Mareyanka.
Waxaa xusid mudan in wadanka Kenya uu deris la yahay Soomaaliya cudurkana uu ku soo fido karo xili walba waxaase muhiim ah in dowladda ay la socoto kana hor tagto Caronovirus.
By : Press room Tags: Deg Deg: Kenya oo soo warisay qofkii ugu horeeyay ee u geeriyooda Carona
Dowladda Poland oo la wareegtay daawo looga hortago Coronovirus oo Norway u socotay
Qoyska Ra’isul Wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Nuur Cade oo ka warbixiyay xaaladiisa caafimaad